Azerbaijan: Tsy afaka nidirana ny tranonkala nanohanana ny mpikatroka · Global Voices teny Malagasy
MpanoratraAli S. Novruzov
Voadika ny 07 Febroary 2019 3:52 GMT
(Marihina fa tamin'ny volana Jolay 2009 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Tsy mandeha, voalaza ho voajirika ny tranonkala fanohanana ireo tanora mpikatroka, bilaogera voahazona.
Araka ny tatitra avy amin'ny Önər Blog, handinika indray ny raharahan'i Emin Milli sy Adnan Hajizade ny Fitsarana Avo ao Baku. Ireo bilaogera sady mpikatroka tanora roa ireo dia voadaroka sy voasambotra ary voaheloka higadra roa volana mialoha ny fotoam-pitsarana noho ny voalaza fa fiampangana ho nanao fihetsika “jiolahy mpandrava”.
Raha nentina teo anoloan'ny mpitsara i Emin Milli dia tsy afaka nitondra an'i Adnan Hajizada tany amin'ny fitsarana noho ny antony tsy fantatra kosa ny manampahefana. Rehefa nanao fangatahana ny fanatrehany ny mpisolovava an'i Hajizada dia nanaiky izany ilay mpitsara ary nanemotra ny fitsarana ho amin'ny 20 Jolay 2009.
Nitombo mazava ho azy ny hetsika an-tserasera niaraka tamin'ireo mpikatroka hafa sy ny mpanohana ilay voafonja izay nampiasa ny tambajotra sosialy sy ny YouTube mba hanaovana fanentanana ho famotsorana azy ireo. Ny omalin'iny anefa dia tsy nisokatra ny iray tamin'ireo vohikala, AdnanEmin.com, izay natsangana ho fiarovana azy ireo .
Araka ny resadresaka tao amin'ny Facebook, maro no niahiahy fa izany no nitranga dia noho ny ping flood, fanafihana tolotra (DoS) rehefa mitobaka ny ping ao amin'ny tranonkala .
Azo heverina fa naharay ping tsy voafetra ny tranonkala ary tsy zakan'ny lohamilina foibe intsony.”
Ora vitsivitsy taty aoriana, dia azo nidirana indray ilay tranonkala.
Azo jerena ato sy ato ny vaovao bebe kokoa momba an'i Emin Milli sy Adnan Hajizade. Manome fanampim-baovao ihany koa ny bilaogy OL! amin'ny dikanteny Anglisy vaovao .